Sida laga soo xigtay maahmaah caan ah, wuxuu gaadhi karay fahamka ma aha adag, laakiin badbaadada. Spotify noqday horyaal in industry ee ay nafteeda caddaynaya sida mid ka mid ah codsiyada ugu fiican fududeynta geeyo music. Iyadoo diyaariyeen ah ee in ka badan 30 milyan oo heeso iyo saldhig taageere ka mid ah 60 million ah, Spotify dhaliyay booska ugu sareeya ee Chine music. Inkasta oo ay jirto xiriir toosan u dhexeeya tirada taageerayaasha oo laga filayo, shirkadda qaatay dhowr ah si ay ugu noolaadaan A.villa kuwa, iyo horumarinta Widgets mid ka mid ah uu ahaa. Company doonayay inuu sameeyo dadka isticmaala ay ka faa'ideysto qalabka sida ciyaaro & pausing of music iyada oo bogga internetka ah oo aan macmiilka, qaybsiga playlists ay guud ahaan internetka, saaxiibo ay iyaga iyo fanaaniinta ay iwm raaco, saasuuna, widgets oo isdiyaari, ma aha oo kaliya ahaayeen bilaabay, laakiin code si ay u Cudarada webpage ee ayaa sidoo kale la bixiyo oo ah qaab iframe. Talaabadan ayaa waxaa si fiican mahadiyo users iyo ugu dhaqsaha badan ka dib markii la bilaabay, kumanaan bogagga internetka ayaa goob joog u qasayso codes ay la kuwa tags iframe oo keeni widget play / hakin ah (ugu badan ee dhan) boggaga ay. Si kastaba ha ahaatee, meel ka mid ah xeerka lama soo Noode / JS ama farsamooyinka kale, weli horumarinta fulin ah oo isdiyaari, la heli karo iyo gundhig widgets in la kordhiyo gaadiidka goobaha ay.
Qaybta 2.Play Button
Part4.Creating Artist ee Page
Qaybta 5.How inay dar Widgets si aad Shabakadaha
Qaybta 6.Spotify music downloader
Waxaa ka mid ah widgets dhowr ah oo Spotify, button Play, Raac button iyo Artist ee page waa kuwa ugu caansan. Feature ugu waxtar leh in codsiga music kasta waa play / hakin heesaha iyo sidaas, button Play waa utility aad u anfacaya. Si ka duwan widget button Play, horumarinta button Raac lahaa ujeeddooyin dhowr ah. Raac button ma macaamiisha kaliya fududeeyay in samaynta users iyaga la socda, laakiin sidoo kale laayo sumcad iyo xayaysiinta ee Spotify. Iyadoo Artist ee Page waxaa lagu sameyn karaa iyadoo la isticmaalayo laba widget caadiga ah kaas oo ka soo gura xogta ka isdiyaari, internetka. Artist ee Page dhaqmo jirrabay Oo aad dhawrtid users addoonsi. Wadajir, saddex, kuwaas oo dhan waxaa lagu qori karaa qaybta widgets gacanta music.
Lahaanshaha widget this on your blog / website iwm ka dhigayaa mid aad u fudud dadka isticmaala ay ku ciyaaraan song fog. Dhammaan waxay u baahan tahay inaad samayso waa click ah. Button Play waxaa la samayn karaa for playlists, fannaaniin, albums ama wax ururinta kale u eeg. Halkii wareegaya macmiilka web / desktop u ciyaaro heeso, inta badan dadka isticmaala ay door bidaan in waxa ciyaaro iyaga dhex widget button Play. Waxaa sidoo kale mahadiyo milkiilayaasha blog sida dadka isticmaala ma u baahan tahay inuu ka tago bogga u dhagaysto music. Widget wuxuu u shaqeeyaa in ka dib markii hab. Sida ugu dhakhsaha badan user yeerto badhanka, music bilaabo ciyaaro. Inkastoo kiiska user waxaa aan ka diiwaan gashan user Spotify saldhigga, ama meesha maadan, waxa uu codsaday in ay login ama saxiixdo oo macmiilka download, ku xidhan seenyada. Iskusoo wada duuboo, barnaamijyada ee blog ha u baahan inuu qoro code for this navigation, oo isdiyaari dhigo mid kasta oo suurta gal.
Si aad u ekeeyn muuqaalka ah ee widget la fiirin iyo dareenka ah bogga internetka, mawduucyada kala duwan ayaa laga heli karaa. Si kastaba ha ahaatee, Spotify ma samayn oggolaanayaa Customization kasta oo widgets weli. Saasuuna user a ma ka bedeli kartaa ama bedeli design sida ay baahida uu. Dheeraad ah, qaababka sida auto play, .Wadashaqayntaas degdeg ah, aragti ah kuwan raadkaygay dhex muuqday, iskushaandheyn heesaha weli la heli karin in widget. Dadka dhaliila waxay yiraahdeen horumarinta waa in ka shaqeeyaan kuwaas oo waa inay keenaan widget ah oo si buuxda u raran.
Sababta aad ka dambeeya horumarka button dabagal ahaa in la sameeyo soo booqda webka raaci Spotify profile milkiilaha blog ama Artist gaar ah. Freaks Music doonayaan in ay wadaagaan dhadhanka dunida oo widget ah iyaga ka dhigaa inay sidaa sameeyaan. Button Raac waxa kale oo ansaxiyay ganacsatada kuwaas oo doonaya in ay kor u raacaynay oo ay aakhirka u kordhin lahaayeen ganacsiga. Sida, dad badan ma ay tusin xiisaha rakibidda app hooyo ama helitaanka adeegga iyada oo macmiilka desktop oo halkan ka raacaan button soo baxday sida kaliya ee ay ku wadaagaan aad profile la kuwa. Iyada oo qayb ka mid ah ugu fiican yahay in waxtar leh noocan oo kale ah waa walax loo heli karaa lacag la'aan ah. Dhammaan waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa in booqo bogga internetka ee Spotify, nuqul ka code iframe oo ku galaha ee HTML code Diintiinii.
4.Creating Artist ee Page
5.How inaad ku darsato Widgets in Shabakadaha
Spotify ka dhigay mid aad u fudud in ay keenaan waxyaabaha widgets aad website oo siinaya codes ah oo ku baaqay in wax laga bedelo wax kasta oo aan samayn. Codes Kuwani iyo hababka fulinta kala duwan yihiin sida ay dhufto. Xaaladdan oo kale, marka aad leedahay helitaanka code HTML ee bogga, waxaad u baahan tahay oo dhan waa inay ku paste
> Resource > Spotify > Spotify Widgets